The iPad Mmetụta | Martech Zone
Sunday, July 1, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Onwere ihe na-aga n’ihu mgbe mụ na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe n’ onlinentanet. Dịka onye na-agụ akwụkwọ na onye na-anọdụ ala n'ihu ihuenyo ma ọ dịkarịa ala 8 awa ụbọchị, ana m achọpụta na omume m agbanweela nke ukwuu n'afọ gara aga. M na-ebubata laptọọpụ m ebe niile… ugbu a anaghị m. Ọ bụrụ na m na-arụ ọrụ, m ma ọfịs m na nnukwu ihuenyo ma ọ bụ n'ụlọ na nnukwu ihuenyo. Ọ bụrụ na m na-elele email ma ọ bụ na-agba ọsọ, ana m anọkarị na iPhone m.
Mana ka m na-agụ, na-azụ ahịa na ntanetị ma na-eme nyocha, ana m achọta onwe m iru iPad m ohere ọ bụla m nwetara.
Mgbe m tetara, m na-abịakwute ya ka m gụọ akụkọ. Mgbe m na-ele ihe nkiri ma ọ bụ telivishọn, ana m abịaru ya iji lelee ihe anya. Mgbe m nọdụrụ ala ịgụ na izuike, ọ na-abụ m mgbe niile ka ọ na-adị. Mgbe m na-eche maka ịzụta ihe, M na-eji ya dị ka mma. Ọ bụrụ na ị chere na nke ahụ abụghị ihe ijuanya… ọ bụ maka m. Abụm snob akwụkwọ. M hụrụ n'anya na obi na isi nke nnukwu akwụkwọ… ma m na-achọta onwe m buru ha elu obere. Ugbu a, m na-azụta akwụkwọ na iPad ma denye aha na magazin.
Ahụrụ m nnukwu ihuenyo n'anya - nke ka mma. Mana ka m na-agu, nnukwu onyogho a karịrị akarị. Ọtụtụ windo, ọtụtụ mata, ọtụtụ akara ngosi… ọtụtụ ihe ndọpụ uche. IPad enweghị ihe ndọpụ ahụ. Ọ bụ nke onwe, nke ọma, ma nwee ngosipụta dị egwu. M na-ahụkarị n'anya mgbe saịtị ịntanetị na-eji mbadamba mbadamba nkume dị ka swiping. Achọpụtara m onwe m itinyekwu oge na saịtị ha ma na-akpakọrịta miri emi.
N'ụzọ dị ịtụnanya, enweghị m mmasị ịkparịta ụka n'sontanet na mbadamba nkume. Ngwa Facebook eme nzuzu… naanị ngbanwe agbazigharị, nwayọ nwayọ n'ịntanetị. Twitter mara mma, mana m na-emeghe naanị ya ka m na-ekerịta nchọpụta m na-eme, ọ bụghị iso ndị obodo na-emekọrịta ihe.
M na-eweta nke a na a blog post n'ihi na m nwere ike ghara ịbụ naanị otu. Na ịgwa onye ahịa anyị okwu, Zmags, onye ọkachamara na mmepe mara mma Mmekọrịta iPad na mbipụta dijitalụ ha n'elu ikpo okwu, ha na-akwado na ọ bụghị naanị m. Mgbe ahaziri ahụmahụ ahụ na ngwaọrụ ahụ, ndị ọrụ na-enwe mmekọrịta miri emi na saịtị ma ọ bụ ngwa ha na-eme.
O zughi ezu maka ndị na - ere ahịa ịme ahịa na-anabata saịtị nke na-arụ ọrụ na iPad. Ha na-eme ka ngwaọrụ ahụ dị ike mgbe ha haziri ahụmịhe ahụ. Ahụmahụ iPad na-adọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa, inwe mmekọrịta ka mma n'etiti ndị ọbịa ahụ, yana ntụgharị dị elu nke ndị ọbịa ahụ.
N'ebe a na Martech, anyị na-eji Onswipe iji bulie ahụmịhe ahụ… mana o nwere oke (dịka ịnwale ịlele infographic ma gbasaa nha ya). Anyị na-atụ anya launching ngwa iPad kama nke mere na anyị nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-uru nke ọkara. I kwesiri iche banyere ime otu ihe.
Tags: ipadomume iPadipad ịzụta omumembadamba
Sep 17, 2012 na 3: 55 AM
Enwere m ike ịhapụ akụkọ a na ahụmịhe nke onwe m dị ka mmetụta taabụ nke Galaxy .. otu ihe ahụ .. jiri oge 10 mee ihe kwa ụbọchị nke awa 5 na-abụghị ọfịs niile dị na Tab, akụkọ, akwụkwọ, egwuregwu, ozi, ozi ịntanetị na ntakịrị nke mmekọrịta [karịa site hootsuite na flipboard]
Nov 9, 2012 na 4:26 AM
Errmmmm, o bu ya mere m ji ahu ya ihe nzuzu mgbe ndi mmadu na achu
Mbadamba gam akporo maka "enweghị ngwa". Ihe niile o kwuru mere eme
eleghi anya karia nke oma.
Sep 17, 2012 na 12:33 PM
Mbadamba ụrọ bụ ngwaọrụ nke nwatakịrị afọ atọ nwere ike iji mee ihe ruo afọ 3. Yabụ kwenyere na ọ dabara n'ụdị ọ bụla ọ bụghị naanị maka otu ndị mmadụ. sonye…
Nov 19, 2012 na 3:49 PM
E wezụga ihe ị kwuru, iPad m bụ ngwa ngwa m maka oge m na-eri nri ụtụtụ na nkwari akụ 🙂 Can; t do not it!
Nov 19, 2012 na 4:08 PM
M ka, MissFrenchy!